Abanye CNC Lathe Machining
Shaft, Umnikazi, Uthi lokuphotha
Khala, Circle, Collar flange futhi Gasket
imishini CNC Lathe Machining Ikhompyutha wenombolo Control noma CNC Lathe zisetshenziselwa ukukhiqiza izingxenye ngokuvula ngentonga okokusebenza akhethiwe nokondla amathuluzi ahlukahlukene ahlabayo ku okokusebenza ekujuleni obuhlukahlukene nama-engeli. Lokhu imishini kusivumela ukukhiqiza izingxenye eqondile kakhulu nge ezincane noma kungekho ukucutshungulwa yesibili. Main Imikhiqizo lathe yethu metal ukuvula imishini kanye nesipiliyoni CNC lathe machining lisenze sikwazi ukuhlangabezana nezidingo ezibanzi izicelo ikhasimende. Ngenjwayelo esikhiqiza preci ...
imishini Ikhompyutha wenombolo Control noma CNC Lathe zisetshenziselwa ukukhiqiza izingxenye ngokuvula ngentonga okokusebenza akhethiwe nokondla amathuluzi ahlukahlukene ahlabayo ku okokusebenza ekujuleni obuhlukahlukene nama-engeli. Lokhu imishini kusivumela ukukhiqiza izingxenye eqondile kakhulu nge ezincane noma kungekho ukucutshungulwa yesibili.
lathe yethu metal ukuvula imishini kanye nesipiliyoni CNC lathe machining lisenze sikwazi ukuhlangabezana nezidingo ezibanzi izicelo ikhasimende. Ngenjwayelo esikhiqiza ngokunemba metal izingxenye nge diameters mncane 0,012 "(0.31 mm) kanye ubude njengoba short njengoba 0,032" (0.81 mm), imishini ungaphindze ihlanganise ubude kufika ku-12 "(304.8 mm) kanye diameters kufika ku-12" (304.8 mm).
Siqasha multi-purpose yethu lathe imishini futhi CNC izinhlelo Ubuchwepheshe ukudala uxhaxha ebusweni bobunjwa, kusukela elula kuya cylindrical eziyinkimbinkimbi futhi kuhlanganise nomumo oyindilinga. Ukuze ngokunemba ukususwa metal, machinists ezinamakhono ukusebenzisa ezihlukahlukene ngokuphawulekayo amasu kanye nezimo turret slant embhedeni lathe bethu turret 12-isikhundla ukufeza anhlobonhlobo ingxenye izici. Lezi zihlanganisa (kodwa azigcini) ukuvula, isidina, imishini, Ukuchusha (kokubili ngaphakathi nangaphandle), u yangaphakathi, grooving, ubuso grooving, ohlangothini kokuphenduka, ukuphrofayela, ubhekene, knurling, usike-off, chamfering, okuvalelisa, futhi radiusing.
CNC lathe Machining kungaba wenza lezi bobunjwa ezifana nezithombe yabonisa, Futhi, Precision CNC yethu lathe Machines iye machining ngokunemba ucezu izingxenye kanye nokunikeza izinsizakalo value-added for Aerospace, ukuxhumana, ezempilo, electronics kanye nezinye izimboni efana neyakho.
Previous: Insika, Pin
Okulandelayo: Rod, Bar, Tube
5d CNC Machining Centre
Ingxubevange Glass yasibamba Izikulufu
Aluminium CNC Machining Izingxenye
Aluminium 7075 CNC Imishini Izingxenye
Aluminium 7075 Junction Ibhokisi CNC Milling Izikhungo
Aluminium CNC Lathe Machining Izingxenye
Aluminium CNC ngomshini Izingxenye
Aluminium CNC Ukuchusha Ukuvula Izingxenye
CNC Aluminium Izingxenye
CNC Auto Parts Milling Izingxenye
CNC Centre Imishini Izingxenye
CNC ngokwezifiso Medical Izinsiza kusebenza Ingxenye
CNC Lathe Ukuvula Izingxenye
CNC ngomshini Aluminium Izingxenye
CNC ngomshini Teflon Izingxenye
CNC Machining Electronic Izinsiza kusebenza Izingxenye
CNC Machining Machine Ingxenye
CNC Machining Ingxenye
CNC Machining Okuyingxenye For Izinsiza kusebenza Production
CNC Machining Ukuvula Ingxenye
CNC Milling ngokwezifiso Izikhungo
CNC Milling Electronic Izinsiza kusebenza Izingxenye
CNC Precision Ingxenye
CNC Swiss Intulo Machine Izingxenye
CNC Swiss Intulo Machining Izingxenye
Izingxenye CNC Kuvulwe
CNC Ukuvula Umdwebo Izingxenye Aluminium
CNC Olukhulu Hardware Izingxenye
CNC Ukuvula Machining Aluminium Izingxenye
CNC Ukuvula Metal Izingxenye
Custom CNC Lathe Machining Izingxenye
ngokwezifiso Precision Machining
Glass yasibamba Izikulufu For Sale
Demand High CNC Machining Izingxenye
Lathe Izingxenye Ukuvula
Machining Aluminium Izingxenye
Isikhunta CNC Machine Centre
Nonstandard Bushing Umkhiqizi Ethula Izingxenye High-Quality ngomshini
Oem Metal Ukuvula Lathe Ingxenye CNC Machining
Eqondile CNC Machining
Precision CNC ngomshini Izingxenye
Precision Lathe ngomshini Inner Ring Izingxenye
Precision Lathe ngomshini Pistion Ring Izingxenye
Intulo Machine Imikhiqizo
Ukuvula Metal Izingxenye
Ezisetshenzisiwe CNC Kuqondile Machining Centre
Isakhiwo 46th, Dayangtian Industrial Area, Shajing Community, Bao'an District Shenzhen 518104 CN